Tafaasiil dheeraad ah oo kasoo baxaysa Dagaal shalay magaalada Muqdisho ku dhaxmaray Mujaahidiinta oo midaysan iyo Maleeshiyada Kooxda Riddada. | Halganka Online
Tafaasiil dheeraad ah oo kasoo baxaysa Dagaal shalay magaalada Muqdisho ku dhaxmaray Mujaahidiinta oo midaysan iyo Maleeshiyada Kooxda Riddada.
Xoogaga Mujaahidiinta ayaa guulo ka gaaray dagaallo culus oo ay shalay magaalada Muqdisho kula galeen maleeshiyaad katirsan Kooxda Riddada iyo ciidamada gaalada AMISOM ee Muqdisho ku sugan.
dagaallo culus oo shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa dhaliyay khasaara xoogan oo soo gaaray Maleeshiyada Riddada oo ay mujaahidiintu kala wareegeen deegaano badan.
dagaalka oo ahaa mid culus ayay si midaysan u qaadeen Shabaabul Mujaahidiin iyo Xisbul islaam oo labaduba dagaal kula jira cadawga AMISOM Cadawga kale ee la shaqeeya.
Saraakiisha Mujaahidiinta ayaa Idaacadda islaamiga Andalus u xaqiijiyay in ciidamada Mujaahidiintu ay durjiyeen Maleeshiyada dagaa Ooge Indha cadde oo fariisimo ku lahaa daarta C/qaasim.
Ciidamada Gaalada AMISOM ee ku sugan KM4 ayaa ku dhiiran waayay in ay dagaalkii shalay ka qayb galaan iyagoona taasi bedelkeed madaafiic aan loo meeldayin ku garaacay xaafadaha Rayidka deganyihiin ee magaalada Muqdisho.
« Beesha Biyamaal oo Hub farabadan ku wareejisay xarakada Shabaabul Mujaahidiin Gobolka Sh/Hoose. Maamulka Xisbul Islaam degmada B/weyne oo ku Hanjabay in ay Gowrac marsiin Doonaan Xildhibaan Gaagaale iyo Maleeshiyaadka kale ee Feer Feer iskasoo abaabulaya. »